Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Kaayyoo fi Labsii Haaraa ABO-Warraaqsa Oromoo amma deemaa jirurraa waan barannee fi daandii fuula duraa,
Kaayyoo fi Labsii Haaraa ABO-Warraaqsa Oromoo amma deemaa jirurraa waan barannee fi daandii fuula duraa,
Mirga hiree isaa murteeffachuuf qabsoon ummatni Oromoo gaggeessu qabsoo haqaa fi mirgaa ti. Mirga bu’uraa isaanii deebifachuuf qabsoon ummatooti godhan chaartara Mootummoota Waltahanii keessatti kan barraawee dha. ABO kan qabsoo godhaa jiru cunqursaa jaarraa tokko dhabamsiisee ummatni Oromoo akka mirga kana gonfatu godhuu dha. Kaayyoo kana bakkaan gahuuf tattaafachuun ABO akeeka dimokraasii irratti kan bu’ura godhatee dha. Kunis ummatni Oromoo walabummaa gosa fedheen jiraachuu ykn ummatoota kaan wajjin tokkummaa siyaasaa ijaarrachuu keessaa murteeffachuuf mirga uumaman qabuu dha.
Posted by Hasan Ismail at 10:31 PM